Soo iibso SoundCloud Comments - TurboMedia.io
Home » Soo iibso SoundCloud Comments
Faa'iidooyin noocee ah ayaan arki doonaa haddii aan iibsado Faallooyinka SoundCloud?
Faallooyinka waxay keenaan sharciyeynta iyo aqoonsigooda posts
Wuxuu gacan ka geysanayaa in uu dhiirigeliyo faallooyin dheeraad ah si looga tago posts
Waxay kaa caawineysaa kordhinta howlgalkaaga sida Likes & Views
Waxaad si buuxda u dhejin kartaa faallooyinka
TurboMedia had iyo jeer waxay bixisaa wax ka badan inta aad iibsatay
Maxay tahay inaan iibsado SoundCloud Comments?
Adeeggan wuxuu runtii kaa caawin karaa inaad bilowdo wada hadalka ku dhajinta boostadaada. Markaad iibsaneyso Faallooyinka, waxay noqon karaan kuwo si buuxda loo habeyn karo si markaas aad ugu hagto wadahadalka jihada aad rabto. Waxaad ku dhajin kartaa ugu yaraan 5 faallooyin hal dhajin. Waxay ka jawaabi karaan qoraallada kale ama waxaa loo adeegsan karaa in lagu bilaabo wadahadal ku saabsan mowduuc gaar ah. Iyagu sidoo kale waa kuwo aad muhiim u ah in laga caawiyo isu dheellitirka waxyaabaha aad jeceshahay iyo Muuqaalladaaga. TurboMedia.io waxay bixisaa faallooyinka ugu tayada sareeya ee laga heli karo khadka tooska ah. Waxaan had iyo jeer la xiriirnaa faallooyinkaaga boostadaada.
Goorma ayuu SoundCloud Comments igu siin doonaa?
Si loo hubiyo adeegga ugu sarreeya iyo gaarsiinta waxaan gacanta ku eegnaa iib kasta. Sidaa darteed, waxay qaadan kartaa ilaa 24 saacadood inta amarkaagu bilaabmayo. 99% wakhtiga dalabkaagu wuxuu bilaabanayaa saacado yar gudahood ama wax ka yar. Haddii aad leedahay amar ballaadhan way sii socon doontaa maalin kasta ilaa adeegga si dhammaystiran loo dhiibo. Waxaan garab taaganahay adeegyadeena 100% waxaanan ku bixin doonnaa amar kasta oo dhameystiran.